Natiijooyinka cododka la tiriyey doorasha Mareykanka ayaa tilmaameysa in Joe Biden… – Hagaag.com
Natiijooyinka cododka la tiriyey doorasha Mareykanka ayaa tilmaameysa in Joe Biden…
Posted on 4 Nofeembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga oo hore u soo noqday Madaxweyne ku xigeenka dalka Maraykanka Joe Biden ayaa hogaanka u haya natiijada codadka la tiriyay doorashada dalka Maraykanka.
Shacabka Maraykanka oo shalay u dareeray doorashada Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa ahayd markii ugu horeysay ee dad intaa la eg u soo banbaxaan doorasho Maraykan ah tobanaankii sano ee la soo dhaafay.
Codadka la tiriyay ee dadka ayaa waxaa ay yihiin kuwo isku dhow iyadoo uu Joe Biden hadda helay codad gaaraya 67,309,205 halka uu Trump ka helay 65,677,781 hase ahaatee codadka loo yaqaan Electral College oo ah kan lagu kala guuleysto ayaa waxa uu Biden helay 238 halka Trumpna uu marayo 213. Codadkan ayaa haddii uu helo 270 cod Biden si rasmi ah waxa uu u noqonayaa madaxweynaha Maraykanka ee afarta sano ee soo socota.
Ilhan Cumar ayaa mar kale ku guuleysatay xubinnimada Aqalka Wakiillada Mareykanka, kadib marki ay la tartantay musharrax ka socday xisbiga Jamhuuriga. Waxaa sidoo kale guuleystay kooxdii loo yaqaan the Squad oo Ilhan ka midka aheyd Alexandria Ocasio-cortez, Rashida Talib, Ayanna Pressley.
Waxaa sidoo kale doorashadi Talaadadi dhacday guulo kasoo hooyay, musharraxiin Soomaali ah oo u tartamayay kuraasta Golaha Deegaanka ee Gobolka Minnesota.